Onye na -emepụta Nickelodeon dara ada na -ekwu na ọ na -eme ihe nkiri na -emegbu emegbu, natara ụgwọ nde $ 7. - Pop Cult
Onye na -emepụta Nickelodeon dara ada na -ekwu na ọ na -eme ihe nkiri na -emegbu emegbu, natara ụgwọ nde $ 7.
akọwapụtaghị Ịdenye aha na Youtube
Na Tuesday, anyị kọrọ na Nickelodeon kewapụrụ Dan Schneider, onye na -emepụta ihe ngosi n'azụ Kenan & nkwupụta ụda; Kel na Ihe niile , n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. Netwọk ụmụaka kwụsịrị mmekọrịta ya na Schneider mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 25, na Oge imecha kọrọ na mmegharị ahụ mere ka Schneider nọ n'okpuru igwe ojii nke enyo enyo maka ịgwọ ụfọdụ obere kpakpando nke ihe ngosi ya. Taa, nkọwa ndị ọzọ na -apụta, gụnyere eziokwu na Schneider nwere ike nweta ụgwọ nde $ 7 iji hapụ ọrụ ya.
Schneider abụghị naanị onye nrụpụta ihe ịga nke ọma na Nickelodeon; a na -enyekwa ya ohere ịchọpụta ụfọdụ netwọkụ ndị ama ama na ama ama ụmụaka gụnyere Ariana Grande, Amanda Bynes, Jamie Lynn Spears, Kenan Thompson, na Victoria Justice. Schneider mekwara ihe ngosi dị ka iCarly , Drake & nkwupụta ụda; Jọshụa , Mmeri , Kenan & nkwupụta ụda; Kel na Henry egwu .
Dị ka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ a na -akpọghị aha kwuru Peeji nke isii , Schneider were $ 7 nde dollar ịkwụ ụgwọ iji pụọ. Nke a na -abịa dịka Oge imecha na -akọ na Schneider ga -ekesara foto nke ụkwụ nwa agbọghọ ya na -eto eto ma depụta okwu iwe ọkụ nke ọma ruo ọtụtụ afọ nke butere ọtụtụ mkpesa maka omume mkparị megide Schneider nke ndị ọrụ ya gbara akwụkwọ. Peeji nke isii na -arụtụ aka n'omume mgbasa ozi na -eju anya karịa, na -ahụta omume ya nke biputere vidiyo ndị yiri ihe na -ekwesịghị ekwesị nke ndị na -eme ihe nkiri ya gụnyere otu Ariana Grande na uwe na -ekpughe na -eji mmiri eme onwe ya.
ọtụtụ ntụaka 3 n'ime egwuregwu
Foto! Mkpịsị aka a bụ nke otu kpakpando nke ihe ngosi m. Mkpisi ukwu ya bụ nke a: http://t.co/OddNtLq2
esi mee ka achicha achicha atọ ka ọkọ
- Dan Schneider (@DanWarp) Ọgọstụ 31, 2012
Mkpịsị ụkwụ: yiri mkpịsị aka, mana ọ baghị ezigbo uru. Onye kwenyere?
- Dan Schneider (@DanWarp) Mee 19, 2010
Schneider anọwo n'etiti asịrị ịntanetị a na -apụghị ịgụta ọnụ ruo ọtụtụ afọ ugbu a, dịka Ihe Ndepụta zuru ezu n'ogologo. Nkwupụta 2012 na blọọgụ ụlọ ọrụ ihe nkiri a na -amaghị aha akpọrọ Schneider 'Onye kachasị njọ dị ndụ' wee kwuo na Schneider bụ ezigbo nna nwa Jamie Lynn Spears (nwanne Britney Spears), onye amụrụ na 2007. Na 2013, otu onye ọrụ n'ime ụlọ mkparịta ụka ọzọ. dere: Schneider bụ otu n'ime nnukwu pedos na biz, mana ọ bụrụhaala na ọ nwere ike were nwa agbọghọ mara mma wee mee ya igwe igwe na -eme ego, hel na -enwe ọrụ mgbe niile.
Otu mgbakwunye Ndị Amanda Bynes gosiputara na Reddit na Schneider kwụrụ ha $ 100 iji kpachapụ ụkwụ ha. Ebubo na ihe nlebara anya ndị ọzọ emeela na Twitter.
eri ole ka onye na -edina ụmụaka na -enwe mmekpa ahụ na -asọ oyi dan schneider bụ na ihe na -eme n'azụ ihe ngosi ya:
kedu mgbe mkpịsị aka etiti ghọrọ mkpasu iwe
- ً (@deludedkiss) Septemba 16, 2017
Ekwesịrị ịmara na a ka ga -enwe ebubo ọha ọ bụla maka omume rụrụ arụ megide Schneider site n'aka onye ọ bụla na -eme ihe nkiri ya na ya rụkọrọ ọrụ, n'ahịrị #MeToo. Isi iyi dị nso na Schneider gọrọ agọ Peeji nke isii ebubo ọ bụla na ya na ndị kpakpando ya nke obere emeghị ihe na -ekwesịghị ekwesị, mana isi mmalite kwetara na ọ nwere ike bụrụ onye isi ike.
Banyere netwọkụ ahụ, Nickelodeon ewerela na Schneiders hapụrụ mkpebi. Ebe ọzọ a na -akpọghị aha gwara ya Peeji nke isii na Schneider na -apụ n'ihi mgbanwe nke njikwa na netwọkụ, enweghị nkwekọrịta na njedebe nke ihe ngosi ya, Ndị na -egwu egwuregwu , yana ọgụ dị na oghere ụlọ ihe nkiri.
Neal Brennan na -ekwu maka ọdịda ya na Dave Chappelle
Space Jam: Onye ntụzịaka Ọhụrụ kwuru na LeBron-Starring Film dị mma karịa nke mbụ
Royal Icing maka kuki Decorating
Jada Pinkett Smith na Alụmdi na Nwunye Ga -eme Smith: Enweela Nnukwu Nrara karịa Nkwenye
Viserion ọ na -eku ume ọkụ ma ọ bụ akpụrụ mmiri? HBO enweghị ike ime mkpebi ya
ihe ejiri icing fond mee
kedu ewu ewu dragon ball z
achicha strawberry na strawberries ọhụrụ site na ọkọ
esi mee fondant icing recipe
kedu ka esi eme ncha
Seth Meyers bụ ara (ntakịrị) na Norm Macdonald gwara Eddie Murphys SNL 40 Bit
Agaghị m agwa ya, Meyers kwuru.
Scarlett Johansson na -akatọ ndị nwanyị di ha nwụrụ na -enwe mmekọahụ na Iron Man 2
Scarlett Johansson kwuru n'ezoghị ọnụ gbasara ịkwa iko nke Natasha Romanoff mgbe ọ pụtara na mpụta mbụ ya na Marvels Iron Man 2.
Kevin Feige na -ekwu na Chris Evans agaghị alaghachi dị ka Captain America n'agbanyeghị mkpesa
Onye isi ụlọ ọrụ Marvel Studios Kevin Feige kwughachiri Chris Evans site na ịgọnarị akụkọ na onye na -eme ihe nkiri ga -alaghachi n'ọrụ Steve Rogers/Captain America.